Topimaso / kaonty an'ny orinasa - King Lion Limited
Shenzhen King Lion Limited, namboarina tamin'ny taona 2006, dia mpamokatra iray, miorina ao amin'ny faritra indostrialy MaoYuan, Distrikan'i Longgang, tanànan'i Shenzhen. Manana ny volavola manokana izahay, ny fampandrosoana ary ny varotra, ny orinasanay dia manana faritra famokarana mihoatra ny 1500 metatra toradroa ary maherin'ny 100 ny mpiasa dia ahitana ekipa endrika matihanina iray sy mpiasa voaofana tsara. Amin'izao fotoana izao dia misy ny atrikasa fanaovana santionany, atrikasa fanodinana fitaovana, birao napetraka, atrikasa fampitaingoana trano sy hotely. Manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana karazana boaty fonosana hoditra, latabatra, haingon-trano, boaty fanatsarana tarehy ary vokatra hafa mifandraika amin'izany izahay, toy ny kapoaka, takelaka birao, sarin-tsarimihetsika, mpihazona / harona ao anaty magazay, boaty fitehirizana, boaty hozatra, ny mpikarakara, ny fitaratra, ny fitoeran-javatra, ny fitoeran-tavoahangin-divay, ny mpihazona karatra anarana, fonosan'ny menio sns. Misy ny endrika sy ny habe rehetra
Manaiky ny ODM sy OEM ihany koa izahay. Izahay dia mifantoka amin'ny famolavolana, ny fampandrosoana ary ny varotra ny tena vokatra.
Hainay ny manompo sy mahay mamaha olana.
Ny vokatray dia mahafeno ny fenitra eoropeanina, amidy tsara ary mahazo tombony manerana an'i Etazonia, Eropa, Azia Afovoany Atsinanana sns. Raha liana amin'ny vokatray ianao dia aza misalasala mifandray aminay ary mandefa ny fanontanianao aminay amin'ny alàlan'ny mailaka, Miorina amin'ny matihanina foto-kevitry ny serivisy "kalitao faran'izay tsara, vidiny mifaninana indrindra, fanaterana ara-potoana ary serivisy aorian'ny fivarotana tonga lafatra", Miaraka amin'ny finoana "mifampatoky, mizara ny tombotsoany ary mifanasoa tombontsoa", dia mamorona ho avy mamiratra kokoa miaraka amin'ny tokantranontsika sy mpanjifa vahiny!
antenaina tokoa ny mpanjifa rehetra ho tonga any amin'ny ozinay mba hijerena, hitarika ary hiara-miasa ary hanangana fifandraisana orinasa maharitra miaraka aminao. Ny zavatra noforoninay rehetra dia azonay namboarina tamina tombo-kase mihaja sy voadio amin'ny vidiny mirary faran'izay mahasoa .na fanomezana ho an'ny hetsika manokana na zavatra hanaovana dokam-barotra momba ny marikao dia afaka mamaly ny zavatra ilainao ny entantsika.